Helikopta abịa na 11 repaints. Ige nti, siri ike awụgharị!
Na 1943, Arthur Young sonyeere Bell iji zụlite ma na-emepụta a helikopta site n'onwe ya research, nlereanya 30. Nlereanya a ka na-viable ma jide, ahụ na abụọ mbipụta na Bell procured mkpa nkà. The Bell nlereanya 47 mere ya mbụ ụgbọ elu Dec. 8, 1945, ọ bụ nke mbụ uka-emepụta helikopta maka agha na ndi nkiti na ndị ọrụ, na-akpa na-enweta a akwụkwọ nke airworthiness na United States obodo.
The United States Army Air Forces enịm iwu na 1947, a otutu yr-13, H-13 ga-aghọ. Ụfọdụ na ngwaọrụ na-eji ndị US Navy n'okpuru designation HTL-1. The US Army ghara ịnọgide dị ka ọ na-eji na a ukwuu nke ngwaọrụ na onye ozi ọzọ, chọpụtara na ọzụzụ. The Bell 47 na-eji na ọgụ n'oge Agha Korea n'etiti 1950 na 1953 dị ka dọkịta na esi kpọpụ mmadụ nile unit.
The ìhè ụgbọelu French Army ji ọtụtụ n'ime ndị a helicopters, karịsịa n'oge Algerie esemokwu ebe ụfọdụ e onwem na akụ ụta SS11. Ndị ọzọ e emejuputa atumatu oru site n'Òtù Ndị Agha Mmiri.
Na ụgbọ elu e wuru na n'ọtụtụ nsụgharị na sub-na nsụgharị nke bụ ihe ịga nke ọma version Bell 47 G. The ngwaọrụ e mepụtara Bell ruo mgbe 1974 na nọgidere na-emepụta n'okpuru ikikere n'ọtụtụ mba ndị ọzọ. The mbụ Agusta-Bell 47 emepụta Italy ama na nke mbụ n'ime 1954, ọ na-emepụta site Kawasaki dị na Japan na Britain site Westland onye wuru 231 mbipụta Sioux renamed na-eji ndị Army Air Corps.
The ngwaọrụ na-emepụta ihe fọrọ nke nta 6000 mbipụta n'ụwa nile. Ọ ka na-eji ọtụtụ mba, ma ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ na iji na-aga n'ihu na-ojuju. Na 1998, na unit équipait mgbe niile njikere agha, Colombia, Greece, Indonesia, Italy, Lesotho, Libya, Malaysia, Malta, New Zealand, Pakistan, Peru, Taiwan, Tanzania, Turkey, Uruguay na Zambia.
(Isi Iyi: Wikipedia)
Onye edemede: Jean-Marie MERMAZ